Holmes Fiber – လုပ်ငန်းတိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ! | Holmbygden.se
အပေါ် Posted 28 အောက်တိုဘာလ, 2014 အားဖြင့် Holmbygden.se
Vi får börja med att gratulera Djupröra Sandnäset och Loviken som fick möjlighet att ansluta sig till fiberföreningen Östra Bräcke. Där håller man nu på att gräva och placera ut utrustning som sen ska kopplas in i deras fastigheter och ansluta mot deras kommunikationsoperatör. ကျနော်တို့လက်ရှိနည်းပါးလာအင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူတို့နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြဿနာကိုမြင်ရပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့နေဆဲကျွန်တော်ပံ့ပိုးမှုများကိုခံလျှင်ကျနော်တို့ကွန်ယက်၏ဆောက်လုပ်ရေးထွက်သယ်နိုင်အောင်ကြီးမားတဲ့ကြောင်းသင်တန်း၏ရလဒ်.
ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်သောစနစ်ကထောက်ပံ့အကြောင်းနူးညံ့ထွက်ခဲ့ကြ. ကြှနျုပျတို့ပွုလမျး၌ကျေးလက်ဒေသများရှိအဆောက်အဦကွန်ရက်ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုသူ Bynet ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်ကျနော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ. ကျနော်တို့ကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေကိုဆိုလိုသည်မှာဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့် ပတ်သက်. နုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းလည်းဖြစ်ကြပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီပေးသည်. အဲဒီမှာသေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမယ့်ကနေရှေးခယျြဖို့နှစ်ခုအပြည့်အဝကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှိပါတယ်ကြပြီမဟုတ်.
ပစ္စုပ္ပန်မှာကျနော်တို့ရှိတယ် 173 တစ်နှစ်သူတို့ရဲ့အခွန်အခပေးဆောင်ကြပြီမဟုတ်အဖွဲ့ဝင်ရာနှင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ထင်မှတ်ခံရဖို့လိုအပ်သည့်. အလားအလာရှိသောအိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်တွေကပိုကလူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိမြေများအတွက်အနာဂတ် join ဖို့ join နှင့်အိမ်နီးချင်းများနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ကြနိုင်ပါတယ်နေဆဲရှိပါသည်.
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “ဂြိုဟ်တု” အိမ်များကိုကြည့်ရှုရန်. မြေပုံအဆက်မပြတ်မွမ်းမံ. Se fullsstor karta.
OBS! အပြာရောင်မှာဖောက်သည်များဆည်းပူးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီ ကျေးဇူးပြု.- နှင့်အဝါရောင်အရောင်အိမ်များ.
ပြီးခဲ့သည့်သုံးလပတ်ကာလအတွင်း 2014 လျှောက်လွှာဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာများအတွက်ကောင်တီဘုတ်အဖွဲ့မှတင်သွင်းရမည်. Beslut om bidrag ska enligt besked komma under första kvartalet 2015. Det som ska presenteras i ansökan är blahur många som tänker ansluta sig till nätet och det är det antalet som ligger till grund för storleken. Efter det att ansökan är inlämnad kan inte antalet medlemmar som är bidragsgrundande ökas. Tillkommer fastigheter efter det att bidraget är beslutat så kommer de självklart att kunna ansluta sig men det kommer att resultera i att de tillkommande fastigheterna kommer att få betala en dyrare anslutning eftersom vi inte kommer att kunna få bidrag för dessa. Hur stor den fördyringen blir återkommer vi till senare. För att inte riskera det anmäl er snarast och betala in er års och medlemsavgift så att ni är med. Ju fler vi är med ju billigare blir varje anslutning.